ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း သို့ ရောက်ရှိ | Moep1's Blog
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း သို့ ရောက်ရှိ
(နေပြည်တော် ၊ ၁ ဇန်န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈) အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဟုတ်ကြည်တို့ လိုက်ပါ၍ ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် (၁၂)မိုင်ခန့်အကွာ ခပေါင်းချောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသော “ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း”သို့ ရောက်ရှိသည်။
ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်း ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ၀န်ကြီးအား စီမံကိန်း ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးမော်သာထွေးနှင့် စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ် တပ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးခင်မောင်ဝင်းတို့က လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍့် အသေးစိတ် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်က ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေး မှာကြားသည်။ ယင်းနောက် ၀န်ကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်နေမှု၊ စက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိမှု၊ဗို့ (၄၀၀)ဓါတ်အားစစ်ဆေးခန်း၊ ဗို့ (၁၁၀၀၀)ဓါတ်အား ထိန်းချုပ်ခန်း၊ ဓါတ်အားပို့လွှတ်မည့် မြေအောက် Cable ကြိုးများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။ ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် Switchyard တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် ကြွေသီးများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ၊ ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း ကွန်ကရစ် လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု၊ စက်ရုံ ရေထုတ်မြောင်းနှင့် ခပေါင်းချောင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ စက်များတပ်ဆင်ရာတွင် အပိုင်းလိုက် မှန်ကန်အောင် စနစ်တကျ တပ်ဆင်ရေး၊ စက်ရုံနှင့် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေး၊ စက်ရုံနှင့် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရိပ်ရပင်များ၊ နှစ်တို နှစ်ရှည် စားသုံးပင်များ စိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝ အလှအပနှင့် သစ်တော သစ်ပင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး၊ မီးဘေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတို့ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး မှာကြားခဲ့သည်။ ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ယခုအခါ(၉၀%)ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ စီမံကိန်းပြီးစီးပါက စက်တပ်ဆင်အင်အား (၃၀)မဂ္ဂါဝပ်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၁၂၀)ခန့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
This entry was posted on Tuesday, January 1st, 2008 at 8:33 am and is filed under ခပေါင်း (Khaboung).	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
ကင်းတား (Kinda) (1)
ကျိုင်းတောင်း (Kengtawng) (4)
ကွန်း (Kun) (6)
ခပေါင်း (Khaboung) (4)
ချီဗွေ (Chibwe) (1)
ချီဗွေငယ် (Chibwe Nge) (2)
စက်ရုံ/စီမံကိန်း အချက်အလက်များ (Stations and Constructions Data) (4)
စိုင်တင် (Saitin) (3)
ဆည်တော်ကြီး (Sedawgyi) (1)
တနင်္သာရီ (Thanintharye) (1)
တာပိန်(၁) (Tarpain-1) (2)
တာပိန်(၂) (Tarpain-2) (1)
တီကျစ် (Tigyit) (5)
ထမံသီ (Htamanthi) (1)
ထာခ (Htakha) (1)
နန်ချို (Nancho) (7)
ပသိ (Pathi) (2)
ပိုဇိုလန် စက်ရုံ (Pozolan) (2)
ဘီလူးချောင်း(၁) (Baluchaung-1) (1)
ဘီလူးချောင်း(၂) (Baluchaung-2) (3)
ဘီလူးချောင်း(၃) (Baluchaung-3) (2)
မုန်း (Mone) (1)
ရဲရွာ (့Yeywa) (26)
ရဲနွယ် (Yenwe) (4)
သကျက် (Thakyet) (1)
သဖန်းဆိပ် (Thapanseik) (1)
သူဌေး (Thahtay) (5)
ဟတ်ကြီး (Hutgyi) (2)
အထက်ကျိုင်းတောင်း (Upper Kengtawng) (3)
အထက်ဆည်တော်ကြီး (Upper Sedawgyi) (2)
အထက်ဘီလူးချောင်း (Upper Beluchaung) (1)
အထက်ရဲရွာ (Upper Yeywa) (5)
အထက်သံလွင်(ကွမ်းလုံ) (Upper Thanlwin(Kunlong)) (2)
အထက်ပေါင်းလောင်း (Upper Paunglaung) (6)
အထွေထွေ (General News) (46)
ဆောင်းပါး (Article) (10)
ဇောင်းတူ (Zhaungtu) (1)
ဇော်ဂျီ(၁) (Zawgyi-1) (1)
ဇော်ဂျီ(၂) (Zawgyi-2) (1)
နော်ချမ်းခ (Ngawchankha) (1)
ပေါင်းလောင်း (Paunglaung) (1)
ရွှေကျင် (Shwe Gyin) (10)
ရွှေစာရေး (Shwesaryay) (1)
ရွှေလီ(၁) Shweli-1 (1)
ရွှေလီ(၂) Shweli-2 (1)
ရွှေလီ(၃) Shweli-3 (4)
သောက်ရေခပ်(၂) (Thoutyaykhat-2) (2)
ဖြူးချောင်း (Phyu Chaung) (4)
မြစ်ဆုံ (Myitsone) (4)
EP-1 Ministry and Chinese company ink deal to cooperate in Ngawchanhka Hydropower Project implementation	Blog at WordPress.com.